Outlook Express मर्मत उपकरण। Outlook Express सफ्टवेयर।
DataNumen Outlook Express Repair सबै भन्दा राम्रो छ Outlook Express संसारमा मर्मत र पुन: प्राप्ति उपकरण। यसले भ्रष्टलाई मर्मत गर्न सक्छ Outlook Express DBX र MBX फाईलहरू र तपाईंको ईमेलहरूको सकेसम्म रिकभर गर्नुहोस्, यसैले फाइल भ्रष्टाचारमा भएको घाटालाई कम गर्दै।
नोट: कृपया प्रयोग गर्नुहोस् DataNumen Outlook Repair भ्रष्ट आउटलुक PST फाईलहरूबाट ईमेल र अन्य वस्तुहरू पुन: प्राप्ति गर्न।
किन DataNumen Outlook Express Repair?
रिकभरी दर मिटर होost को एक महत्वपूर्ण मापदण्ड Outlook Express डाटा रिकभरी उत्पादन। हाम्रो विस्तृत परीक्षणहरूमा आधारित, DataNumen Outlook Express Repair सबै भन्दा राम्रो रिकभरी दर छ, बजारमा अन्य प्रतिस्पर्धीहरु भन्दा धेरै राम्रो!
कसरी भन्ने बारे बढी सिक्नुहोस् DataNumen Outlook Express Repair धुम्रपान प्रतिस्पर्धा
स्वतन्त्र अनुवाद र वेबसाइट विकास
अन्तमा - एक उत्पाद जुन यो कुरा गर्छ सीधा बिना बकवास दृष्टिकोण र शानदार परिणामको साथ। राम्रो काम! काश मैले तपाईंको उत्पादन पहिले पाएँ
धन्यबाद मसँग १ Nov नोभेम्बर देखि ब्याक अपमा सबै dbx फाईलहरू थिए र बाँकी सबै थियो
मार्क टच मिडिया
DOER को डेमो संस्करण प्रयोग गरियो -
मैले किनेको DataNumen Outlook Express Repair र सफलतापूर्वक मेरो फोल्डरमा फाईलहरू पुनः प्राप्त गर्यो जुन कुनै प्रकारले मेरो OE सूचीबाट हरायो। तपाइँको
प्रबन्धक एक्सप्रेस लेखा समाधान
केहि साना कुराहरु भन्दा,
मसँग थियोost कम्पेक्ट गर्ने प्रक्रियाको बखत महत्त्वपूर्ण ईमेलहरू र तिनीहरूलाई कसरी फेला पार्ने वा तिनीहरूलाई पुन: खोल्ने भनेर थाहा थिएन। तपाईंको उत्पादले isssue समाधान गर्‍यो
मुख्य सुविधाहरू DataNumen Outlook Express Repair v2.5
पुन: प्राप्ति गर्न समर्थन Outlook Express M mbx फाईलहरू र Outlook Express //5 dbx फाईलहरू।
दूषित मिडियामा dbx फाइलहरू र mbx फाइलहरू पुनःप्राप्त गर्न समर्थन गर्दछ, जस्तै फ्लपी डिस्कहरू, Zip डिस्क, CDROM, आदि।
Dbx फाईलहरू र mbx फाइलहरूको एक ब्याच मर्मत गर्न समर्थन गर्दछ।
4GB सम्म dbx र mbx फाइल मर्मत गर्न समर्थन गर्दछ, ताकि यसले २GB समस्याको साथ dbx फाइलहरू ठीक गर्न सक्दछ।
पुन: प्राप्ति गर्न समर्थन Outlook Express टेम्पोबाट डाटाrary .dbt फाईलहरू।
स्थानीय कम्प्युटरमा मरम्मत गर्नको लागि dbx वा mbx फाइलहरू फेला पार्न र चयन गर्न समर्थन गर्नुहोस्।
विन्डोज एक्सप्लोररको साथ एकीकरण समर्थन गर्नुहोस्, ताकि तपाईं सजिलै विन्डोज एक्सप्लोररको कन्टेक्स्ट मेनूको साथ dbx फाईल मर्मत गर्न सक्नुहुनेछ।
समर्थन कमान लाईन (DOS प्रमोट) प्यारामिटरहरू, ताकि तपाईं आफ्नो कार्यक्रम बाट DOER बोलाउन सक्नुहुन्छ।
प्रयोग DataNumen Outlook Express Repair पुन: प्राप्ति गर्न Outlook Express इमेल
Outlook Express सबै ईमेलहरू .dbx फाइलहरूमा भण्डार गर्दछ। उदाहरण को लागी, Inbox.dbx फाईल ईनबक्स मा ईमेलहरु छन्, Outbox.dbx फाइल मा आउटबक्स मा इमेलहरु छन्, र यस्तै।
यदि .dbx फाईल बिग्रेको छ र तपाईं यसमा ईमेलहरू पहुँच गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ DataNumen Outlook Express Repair यसबाट तपाईंको ईमेल पुन: प्राप्ति गर्न। पुनःप्राप्त ईमेलहरू .eml फाईलहरूको रूपमा सुरक्षित गरियो जुन सजिलैसँग फिर्ता आयात गर्न सकिन्छ Outlook Express.
भ्रष्ट .dbx वा .mbx फाईल खोज्नुहोस् यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभएको छैन भने मर्मत गर्न।
नोट: यसका साथ दूषित dbx वा mbx फाइल मर्मत गर्नु अघि DataNumen Outlook Express Repairकृपया बन्द गर्नुहोस् Outlook Express र कुनै अन्य अनुप्रयोगहरू जुन फाईल परिमार्जन गर्न सक्दछ।
मर्मत गर्न भ्रष्ट dbx वा mbx फाइल चयन गर्नुहोस्:
तपाईं dbx वा mbx फाईलनाम सिधा इनपुट गर्न सक्नुहुनेछ वा क्लिक गर्नुहोस् ब्राउज र फाइल छनौट गर्न बटन। तपाईं पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ स्थानीय कम्प्युटरमा मरम्मत हुनका लागि dbx वा mbx फाइल फेला पार्न बटन।
पूर्वनिर्धारित, DataNumen Outlook Express Repair डाइरेक्टरी xxxx_recorses मा सबै बरामद सन्देशहरू उत्पादन गर्दछ, जहाँ xxxx भ्रष्ट dbx वा mbx फाईलको नाम हो। उदाहरण को लागी, Inbox.dbx फाईलका लागि, पूर्वनिर्धारित आउटपुट डाइरेक्टरी इनबॉक्स_प्राप्त हुनेछ। यदि तपाईं अर्को डाइरेक्टरी प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने कृपया यसलाई अनुरूप चयन गर्नुहोस्।
तपाईं सिधै डायरेक्टरी नाम इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ वा क्लिक गर्नुहोस् ब्राउज र निर्देशिका छनौट गर्न बटन।
क्लिक गर्नुहोस् टांक, DataNumen Outlook Express Repair हुनेछtart भ्रष्ट dbx वा mbx फाईलबाट मेलहरू पुनःप्राप्ति गर्दै। प्रगति पट्टी
मर्मत प्रक्रिया पछि, यदि कुनै पनि सन्देशहरू सफलतापूर्वक dbx वा mbx फाईलबाट पुन: प्राप्ति भए, तपाईले सन्देश बाकस यस्तै देख्नुहुनेछ।
अब तपाईं संग एक रिकभर गरिएको सन्देश खोल्न सक्नुहुन्छ Outlook Express डबल क्लिक गरेर आउटपुट डाइरेक्टरीमा .eml फाईलको आइकन। वा मेल फोल्डरमा भित्र बहु ​​सन्देशहरू आयात गर्नुहोस् Outlook Express.
DataNumen Outlook Express Repair 2.5.२ डिसेम्बर १th, २०२० मा जारी हुन्छ
DataNumen Outlook Express Repair २. November नोभेम्बर 2.3th, २०२० मा जारी हुन्छ
DataNumen Outlook Express Repair २.२ सेप्टेम्बर २,, २०१ on मा जारी भयो
DataNumen Outlook Express Repair २.१ जुलाई,, २०० on मा जारी भयो
DataNumen Outlook Express Repair २.० जनवरी २,, २०० on मा जारी भयो
DataNumen Outlook Express Repair १. Dec डिसेम्बर,, २०० 1.5 मा जारी भयो